304/316 Saxanka Shaandheeyaha Birta La Siintered, Saxeexa Filterka Filterka ah 0.5 -100 Micron
Shaandhaynta birta aan fiicnayn ee shabagga ah ee giraanta giraanta ah (miiraha saxanka, baakadaha shaandhaynta, saxanka shaandhaynta mesh silig).
Nooca Walxaha: Mesh birta ah, mesh naxaas ah, mesh naxaas ah, maro silig madow, mesh nikkel, mesh monel, mesh degdega ah, mesh inconel iwm SUS304 Saxannada Mesh birta ah ee aan birta lahayn ee leh cidhifyada ayaa si caan ah loo isticmaalaa shaashadda sifaynta warshadaha batroolka. Sifaynta Shaashadda Fasalka aan-Aashitada-Aashida lahayn ee Mesh Discs waa baakado fidsan oo laga soo shaqeeyay 304, 304L ama 316 ss maro mesh ah oo leh hanti-ka-hortagga aashitada iyo daxalka. Iyadoo la raacayo cabbirada caadiga ah ee
Lakabyada Disk Ikhtiyaarada: Hal-lakab iyo lakabyo badan; birta qarkeeda leh mesh-lakabyo badan oo alxan leh, saxanka mesh-ka-jidhka ah, iwm.
Waxaan farsameyneynaa saxanka mesh-ka ee leydi ama afar gees ah, suunka nooca giraanta ah iyo qalabka kale ee shaandhada iyadoo la raacayo shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha.
Anti-acid iyo alkali;
Sifeynta tooska ah, habka fudud;
Awood haynta wanaagsan iyo hoos u dhaca cadaadiska;
Si fudud loo rakibo;
Si fudud loo nadiifin karo oo leh adkeysi aad u wanaagsan. Awood farsamo oo heer sare ah oo loogu talagalay ka shaqeynta dhibaatada bilaashka ah.
Iska caabin sare oo jireed & kiimiko.
Isticmaalka: Sifee saxanka inta badan loo isticmaalo nadiifinta, nuugista, uumiga iyo habka sifaynta ee caag, warshadaha balaastikada, baadhista hadhuudhka iyo saliidda, batroolka, warshadaha kiimikada, warshadaha iftiinka, daawada, biraha, mishiinada, dhismaha maraakiibta iyo warshadaha kale.
Faa'iidooyinka disc filter waa tayada sare iyo awoodda sifeynta, walxaha shaandhada saxda ah ee ku habboon, saamiga ugu sarreeya ee kharashka, xakamaynta tayada joogtada ah inta lagu jiro wax soo saarka iwm. Waxaa si ballaaran loo isticmaalaa sifeynta dhalaalka.
Hore: Shaashadda mesh-wareegga ee birta aan-dhalatada lahayn, shaashadaha wax-ka-baxa waxay shaandheeyaan xirmo mesh ah
Xiga: Shaandhaynta Dareeraha Warshadaha ee 304/316 Cunsurka Shaandhaynta Basket-Birta Aan-la-hayn
Shaandheeyaha dhuumaha gaaska dabiiciga ah - filtarrada konical
Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu ilaaliyo kombaresarada, bambooyin, marawaxadaha iyo valves solenoid. Shaandheeyaha loo yaqaan 'conical filter' wuxuu leeyahay awood sare, qallafsanaan wanaagsan iyo waxtarka sifaynta sare. Waxqabadka xasiloon wuxuu xaqiijin karaa hufnaanta qalabka wax soo saarka iyo ilaalinta bambooyin, valves iyo qalabka kale. Nooca badeecada: shaandhaynta koodhka hoose ee fiiqan, shaandhada koodhka hoose ee fidsan, shaandhada qoob-ka-tooska ah, filtarrada toonta leh ee tidcan. Waxyaabaha: mesh silig sinteed, mesh silig bir ahama, aluminium naxaas ah...
Kartridge saliid aan caadi ahayn oo bir ah
Warbaahintu Shaandhayso: Shabag bir ah oo bir la'aan ah ama fiber bir ah oo sinteed-ka-soo-baxa ah fiber-ka-soo-baxa birta-xumeeya ee la dareemay waa dalool shaandhaynta shanlada malabka leh oo heerkeedu sarreeyo. Oo waa nooc ka mid ah waara oo la dhayalsan karo, dharbaaxo ku filan waxay heli kartaa aag sifeyn weyn. La jeexjeexay qaab dhismeedka daloolka darajada leh, wuxuu ku raaxaystaa faa'iidooyinka heerka porosity-ga sarreeya, aagga sifaynta badan, awoodda wasakhda sare ee haynta iyo si isdaba joog ah ayaa loo isticmaali karaa. Maro siligo ah oo bir ah oo aan bir lahayn ayaa lagu sameeyaa iyadoo la toleeyo ista...